Indlela yokubheka abasakazi ayisafani
UKHULEKANI Shandu okhulumela iGagasi FM
FANELESIBONGE BENGU | August 27, 2019
NGAPHAMBI kokungena odabeni olusihlanganisile namhlanje angiqale ngibonge ukuthi isixazululekile indaba yeSABC nokusakaza imidlalo ye-Absa Premiership.
Phela selokhu kuqale isizini abalaleli bemisakazo yeSABC bayizwa ngendaba imidlalo ngisho nakuthelevishini.
Ibuya nje, sebezoyizwa ngendaba nentandokazi yomsakazi webhola uReggie “Mapensela” Ndlovu. UMapensela odume ngokuthi “izodlala i tv” namanye amatemu usejoyine iSupersport.
Kodwa siyabonga koNgqongqoshe Nathi Mthethwa noStella Ndabeni-Abrahams ngokungenelela ukuze ixazululeke le nkinga. Ngendlela ebijule ngayo bekungagcini nje kuphela ngokuthi ibhola lingasakazwa kodwa bekungashiwo ngisho imiphumela yemidlalo ukuthi ihambe kanjani.
Kodwa-ke asikho lapho. Namhlanje ngifisa ukuphawula ngendaba yezokusakaza esiyibona namuhla.
Ngithe ngizincokolela nokhulumela iGagasi FM, uKhulekani Shandu, wangikhanyisela ngokuthi indlela yokubheka abasakazi ayisafani nasekuqaleni.
Akusabhekwa nje kuphela ithalente kepha luyabhekwa nodumo analo emphakathini nasezinkundleni zokuxhumana.
Yinto ehlale ikhulunywa futhi ekhalisa abaningi ukuthi kufakwa osaziwayo emisakazweni ekubeni ithalente lingekho. Abantu abasha abaseziteshini zomphakathi ababheke ukuthola amathuba bayalimala.
UShandu ungivezele ukuthi ukuba nabalandeli abaningi ezinkundleni zokuxhumana kuyasiza uma kuhambisana nethalente.
Uthe abanye abakhangisi bayaye babe nemikhankaso abangafuni kuphela ukuthi igxile emoyeni kodwa idlulele nasezinkundleni zokuxhumana. Yilapho-ke umsakazi onabalandeli engena khona. Futhi lokho akugcini kuphela ngokungenisela isiteshi imali kepha kwayena umsakazi kunochatha awutholayo ngalokho.
Kuyamsiza futhi nomsakazi ukuthi aqashwe emicimbini ngoba abahleli bayabona ukuthi lowo msakazi uyisilomo uma enabalandeli.
Singakhala sifike lapho sithanda khona kodwa yiyona ndlela yokusebenza manje futhi imali yiyona ebalulekile ekutheni umsakazo uphile. Uzokhumbula ukuthi iMetro FM ikwenzile ilanda osaziwayo njengoSomizi ibafaka emoyeni. Hhayi ngoba benethalente kodwa yingoba benabalandeli okuzokwenza ukuthi umsakazo wabo unakeke nokuzokwenza kubelula ukuthola abakhangisi.
Yingakho kubalulekile ukuthi ngisho ngabe usesiteshini somphakathi uqale uzakhele abalandeli bakho. Okuzokwakhela ugazi ezinkundleni zokuxhumana ukuthi ubaphendule abalandeli. Ayikho into eyisicefe njengokukhulumisa umuntu akuzibe bese elokhu ephendula abangani bakhe kuphela.
Ngaphezu kokuba phezulu kwezinombolo kodwa abakhangisi bayabheka ukuthi okufake ezinkundleni zokuxhumana kufinyelele kubantu abangaki. Uyakwazi ukuthola izinombolo ezingaphezu kwabalandeli bakho uma abangani bezokusabalalisa okufakile.
* Ungangibhalela [email protected], kwiTwitter @fanelebengu noma uFacebook Fanelesibonge Bengu